MUUQAAL: Farduus Ibraahim Shire oo Fariin u dirtay beesha Dhulbahante iyo Madaxwayne Mustafe Cagjar ! (Daawo) | KALSHAALE
MUUQAAL: Farduus Ibraahim Shire oo Fariin u dirtay beesha Dhulbahante iyo Madaxwayne Mustafe Cagjar ! (Daawo)
Sep 13, 2018 - 6 Aragtiyood
Laascaanood ( Kalshaale ) Farduus Ibraahim Cali Shire ayaa ka hadashay Dhulka Balaadhan ee Beesha dhulbahante ay ka degto Deegaanka Soomaali Galbeed iyo Gobolka Doollo, Kuwaasi oo aysan Wax degmo ah ku lahayn, Waxayna sheegtay in dulmi hore uu ku hayey Cabdi Iley, Hadana maamulka Cusub aan laga yeeli doonin.
Waxay si gaar ah Fariin adag ugu dirtay Guud ahaanba Waxgaradka Beesha oo ay sheegtay inaan la Aqbali karin Dulmigaasi inuu sii socdo, Islamarkaana deegaano kale laga maamulka Bulshada Balaadhan ee Dhulkaasi ku dhqan, Cashuurtoodana degmooyin kale lagu dhisayo oo iyaga aan waxba loo Qaban.
Beesha Dhulbahante ayaa kamid ah Beelaha deegaanada ugu Balaadhan ku leh Soomaali Galbeed, Waxaana lagu Qiyaasaa in ka badan ( 80 ) Isugu Jira Magaalooyiin iyo Tuulooyin inay ku leeyihiin Dhulkaasi, Balse aan wax degmo ah iyo Gobol midna ku lahayn oo deegaano kale laga maamulo.
Deegaanka dhulbahante dhulka shuftaanow qoran ayuu ka mid ahaa.
Waxay u yaqaaneen in laga taageero onlf.
Anigu dhulkaa waan maray qaar baa maagaalin waa weyn ah sida docmo,qararo, marqaan weyne, iyo heegaale.
Garan maayo waxa midkoodna degmo ku noqon weyday halka tuulin yar yar lagu taxay degmooyin.
Tan afkeeda iyo dhagaheedu isma maqlaan miyaa sowtii odhanjirtay cabdi maxamuud cumarow nagasoogaadh iidoorka kkkkk ma maantay cabanaysaa iskaga so guura reer somaliland ayaad tihiine
Inaabti 100% waan kugu taageersanay inta aad tidhi oo dhan.
Fariid allaa ya cizak.
Waar yaa Aarka Hargaysa,
Waar ii amaan geli inaabtiday. Xadii kale wax waliba waaga iga xaaraane xabad baam jilibka kaala beegsan.
Cid walba maag, laakiin dhulbahante kaama yeelayo inaad shiido!
Reer abtigay waa Dhulbahante Somali ku noqonmaysid oo waxaa jira Sacuudi hooyadi tahay Dhulbahante YAA DHAMAAJUUG dhogortaadi soo saar. WBT
Inantaan waa nin dhiig badan waxaan ku ogaa dagaalkii Tukoraq ee Qarnigii Tagey.
Oo Killinka ma waxaa canshuurta idinka qaato Ogaadeen iyo Majeerteen sida, Laascaanood (Isaaq) iyo Tukoraq (MJ)
Quraan Aqrista Isaaq ayaa idin habaarey 1988.
-Gaaljecel iga dheh ilaa Dhad iyo Kenya ayuu socdaa, hadana Tayo iyo midnimo maleh.